Ogaden News Agency (ONA) – Agaasimaha African Oil Corp. Keith Hill oo been aan jirin ku iibinaya Stockholm
Agaasimaha African Oil Corp. Keith Hill oo been aan jirin ku iibinaya Stockholm
Posted by ONA Admin	/ November 15, 2011
Idaacad ka hadasha dalka Sweden ayaa wareysi dheer la yeelatay ninka lagu magacaabo Keith Hill, Agaasimaha Guud ee shirkadda African Oil Corp. oo ah shirkadda ay Lundin Petroleum ka iibisay qaybtii ay ku lahayd shidaal baadhista.
Sidaan la socono labada wariye ee ka xidhan Sweden Martin Schibbye iyo Johan Persson ayaa ugu socday Ogadenya intaan la qabanin inay soo baadhaan falaadkii shirkadda Lundin Petroleum intay joogtay Ogadenya, arintaasoo si aad ah loogu eedeeyay WAD ee dalka Sweden oo sidii laga filayay aan u difaacin muwaadiniinta ka xidhan dalkiisa. Waxaa hubaal ah in wareysiga Keith Hill ay qayb ka tahay baadhitaanka ku socda shirkadda Lundin iyo dhibaatadii loo gaystay shacabka Somalida Ogadenya.
Haya’adaha caalamiga ah ee xuquuqul insaanka iyo kuwa samafalada ayaa xaqiijinaya inay ciidamada Itobiya u gaystaan dadweynaha nugulka ah gaboodfalo baahsan marka ay la dagaalamayaan jabhadda ONLF, gaboodfaladaa oo isugu jira jidh-dil, afduub, barakicin, kufsi iyo dil.
Ninkan la wareystay Keith Hill ayaa ku sheegay wareysiga inay jiraan gaboodfalo isagoo raaciyay inaysan iyagu arag wax muujinaya arintaa. Wuxuuna intaa ku darayaa in dadkuu la kulmay ee ka socday xukuumadda iyo ciidanka Itobiya ahaayeen dad xilkas ah oo doonaya inay arimahaa wax ka qabtaan.
Wuxuu kaloo sheegayaa Hill inay African Oil Corp. isku dayayso inay dadweynaha Ogadenya ku cawiso mashaariic horumarineed.
Hasa ahaatee Kerstin Lundell, oo ah wariye ka qortay shirakadda Lundin Petroleum kitaab qaatay abaalmarin ayaa arintaa ku tilmaantay wax lala yaabo oo tidhi; “Hadday jirtaba, ma’aha kuwa ay caawinayaan shacabka laga eryayo guryahoodii ama la gubayo aqaladooda, waxaa hubaal ah in aanay caawinin dadweynaha Ogadenya ee goobahaa dagan.”
Hill ayaa wareysiga ku leh ma’aanan arag wax muujinaya dagaal ka socda goobaha aan joogno, hasa ahaatee gabadhan Lundell ayaa tidhi, shirkadda African Oil Corp. iyo kuwa kalee shidaal waa laga yaabaa in aanay arag dagaal sababtoo ah goob lagu kala food-qaaday umaby yimaadaan, hasa ahaatee bay raacisay waxaa hubaal ah in qaar ka mid ah shaqaalaha shirkadda ay arkeen arimahaa.
Wuxuu sheeganayaa Hill in shirkadda African Oil Corp. ay ceelka ugu horeeya ka qodi doonto koonfurta Ogadenya dhamaadka 2012 ama 2013, wuxuuna kula kulmayaa Stockholm maalgaliayaal danaynaya shirkadiisa. Isagoo intaa raaciyay waa fursadii ugu dambaysay qofkii doonaya inuu wax nugu darsado inta aanan bilaabin qodista.
Waxaa halkaa kaaga muuqanaya inuu yahay Hill qof dacaayad u samaynaya shirakadiisa oo doonaya in la maalgaliyo, waxaase hubaal ah inuu ku hungoobi doono shidaalka Ogadenya siday ugu hungoobeen shirkado badan oo ka horeeyay African Oil oo lafahooda uga cararay ciida Ogadenya.
Sidaan la socono shucuubta Afrika waxaa qaar badan ay naftooda u waayeen si loo biliqaysto khayraadka dhulkooda ku jira oo laga yaabo inaysan laba soconin. Meelaha sida aadka ah loogu dhibaateeyo shacabkii daganaa waxaa ka mid ah dhulka shidaalka (dahabka madow) laga helo, kolkaasoo ay shirkadaha ajnabiga ee soo saaraya shidaalka iyo xukuumadaha dalalkaa ka taliya ee musuq-maasuqa ku caan baxay ama adoonsiga ku haysta shacbkii dhulka lahaa ku heshiiyaan inay boobaan hantidaa dabiiciga. Shirkadahaa dhaca iyo boobka u socda waxaa dhaqan u ah inay laayaan ama sasabaan dadkii xaqqa u lahaa hantidaa ay dhacayaan.
Waxaa xusuusin ah inuu Keith Hill dhabarka u ridan doono dhibaatada soo gaadha shaqaalaha shirkada African Oil Corp. iyo kuwii kalee soo hunguriyeeya shidaalka Ogadenya.